တစ်နှစ်ပြည့် | ပျူနိုင်ငံ
မငျးပွားနဲ့ ပေါကျတောမှာ လကျနကျကွီးကညျြကွောငျ့ အရပျသား ကိုးဦးဒဏျရာရ
ကျနော့်ရဲ့ “ပျူနိုင်ငံ” စာမျက်နှာက ဒီနေ့ဆိုရင် တစ်နှစ်ပြည့်ခဲ့ပါပြီ။
အဲဒီတော့ တစ်နှစ်ပြည့် အလှူလုပ်ရမှာပေါ့ဗျာ။ စားစရာတွေ၊ သောက်စရာ
တွေက မျက်နှာချင်းဆိုင်ဆိုရင်တော့ တတ်အားသရွေ့ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဟိုနေရာ သည်နေရာက ရှာဖွေပြီး ဒေါင်းလုပ်(Download) ချထားတဲ့
စာအုပ်လေးတွေပဲ ရှိပါတယ်။ ဖတ်ပြီးသား၊ ကူးယူပြီးသား ဖြစ်နေရင်တော့
(မှတ်ချက်။ ။မူရင်းစာရေးဆရာများနှင့်တကွ အင်တာနက်ပေါ်သို့ ဦးစွာပထမ
ပို့ဆောင်ခဲ့သူများကို မူပိုင်ခွင့်အရ လေးစားစွာ မေတ္တာရပ်ခံ တောင်းပန်အပ်ပါတယ်။)
(၁)ဆရာဇေယျာရဲ့ “စာပေ သမိုင်း ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အတွေးအမြင်များ”။
ဒီနေရာမှာ Download ယူပါ။
(၂)ယောအတွင်းဝန် ဦးဖိုးလှိုင်ရဲ့“သဒ္ဒါသဘောများနှင့် ရေးနည်းများ”။
“ကဗျာရေးနည်းနိသျည်း”။ (ဒီစာအုပ်က တကယ့်ရှားပါးစာအုပ်ပါ။)
(၁၃)အရှင်အာနန္ဒာရဲ့ “ရှေးခေတ်မြန်မာ ကဗျာများ”။
(၁၇)ဆရာမောင်သာနိုးရဲ့ “ဂန္ထ၀င်မြန်မာ ကဗျာ”။
“ခေတ်ပေါ်နိုင်ငံတကာ ကဗျာရှည် ၃-ပုဒ်”။
(ဒီစာအုပ်ကို ဖတ်ရင် တစောင်းကြီးဖြစ်နေပါတယ်၊သည်းခံပြီး ဖတ်ရူကြည့်ပါ။)
(ကွယ်လွန်သူ အမေလူထုဒေါ်အမာရဲ့ ၉၃ နှစ်မြောက်မွေးနေ့ အမှတ်တရ။)
….. ဒေါင်းလုပ်ချလို့ အခက်အခဲရှိသူများ ko.aungdk@gmail.com
Posted by ကိုအောင် at 00:07
တစ်နှစ်ပြည့်မှသည် နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာထိ စာတွေ ကဗျာတွေကို အားမာန်အပြည့်နဲ့ ဆက်လက်ရေးသားနိူင်ပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ် ကိုအောင်ရေ...
ဘယ်လိုမှ တန်ဘိုးဖြတ်လို့မရနိူင်တဲ့ ခင်ဗျားရဲ့ မျှဝေမှုတွေအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ စကားလုံးထက်အဆပေါင်းများစွာပိုတဲ့ စကားလုံးကို ကျနော်ရှာဖွေပြီးပြောလို့ရမယ်ဆိုရင် အကြိမ်ဖန်ပေါင်းများစွာ ရှာဖွေပြောဆိုခွင့်ပြုပါလား ကိုအောင်ရာ....
24 February 2009 at 04:35
ကိုအောင်ရေ့ တနှစ်ပြည့်မှသည် နှစ်ပေါင်း ရာကျော်သည်အထိ ဆက်လက် ပြီး စာတွေ ရေးနေ မျှဝေပေးနေ နိုင်ပါစေ...
ကိုဆောင်း ပြောခဲ့သလိုပဲ စာပေအတွက် မျှဝေပေးမှုများအပေါ်မှာ ကျေးဇူး အထူးတင်ရှိလျက်ပါ...
24 February 2009 at 04:50
တစ်နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ပွဲကို လာရောက်သွားတယ်ဗျို့။ အပေါ်မှာ ကိုဆောင်းတို့ ကိုအောင်သာငယ်တို့ ပြောသွားသလိုပဲ ပေါ့ဗျာ.. စာပေအကျိုး ဆတက်ထမ်းပိုး သယ်ပိုးနိုင်ပါစေ။
24 February 2009 at 05:42
၃ ယောက်လုံး ဆုတောင်းသွားကြတဲ့ အတိုင်း.
ရှာရှာဖွေဖွေ စုဆောင်းပေးနိုင် တာကို
ကျေးဇူး တင်ကြောင်းလဲ ထပ်ခါ .ထပ်မါ ပြောပါ ရစေ..
အကုန်လုံး လိုချင် တယ်....း)
ဒေါင်းရတာ မလွယ် တော့...
24 February 2009 at 11:27
အပေါ်က ဆုတောင်းပေးကြတဲ့အတိုင်းပဲ :)။ အိမ်ပြောင်းနေလို့ ခုမှ လာဖြစ်တယ်ဗျို့
24 February 2009 at 15:33
ကိုအောင်ရေ အပေါ်က အကို အမတွေ ဆုတောင်းပေးတဲ့အတိုင်းပါပဲ။ တနှစ်ပြည့်မှာ မှတ်မှတ်ရရ အဖိုးတန်စာအုပ်တွေ စုပြီး မျှဝေပေးတဲ့အတွက်လည်း ကျေးဇူးပါ။ နောက်မှပဲ ဒေါင်းလုပ် ဆက်လုပ်တော့မယ်။ အခုလုပ်တော့ ဇစ်ဖိုင်တွေက ဖွင့်လို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်။
24 February 2009 at 15:54
တနှစ်ပြည့်မှသည် နှစ်ပေါင်း ရာကျော်သည်အထိ ဆက်လက် ပြီး
စာတွေ ရေးနေ မျှဝေပေးနေ နိုင်ပါစေ...
ကျေးဇူး တင်ကြောင်းပြောပါ ရစေ..
အကုန်လုံး လိုချင် တယ်....
download ဒေါင်းရတာ မလွယ် တော့...
24 February 2009 at 20:12
25 February 2009 at 03:02
စာအုပ်တွေ တစ်နေ့ချင်းစီ ဒေါင်းလုပ်လုပ်မယ်လို့ စိတ်ကူးထားတယ်..။ကျေးဇူးပါ။
25 February 2009 at 15:05
ခုမှ ရောက်ပေမယ့် တစ်နှစ်ပြည့်ဆိုတာ တွေ့လို့ ဘာမဆိုင် ညာမဆိုင် ၀မ်းသာကြောင်း ပြေသွားပါသည်။ စာတကယ်ဖတ်ပြီး တကယ်ပြန်ရေးနိုင်တဲ့ blog တွေမြင်ရတာ စိတ်ချမ်းသာ၏။ လင့် သွားသည်။
25 February 2009 at 20:50
ကိုအောင်.. တနှစ်ပြည့်မှသည် နှစ်ပေါင်းများစွာ စာတွေဆက်ရေးနိုင်ပါစေ... စာအုပ်တွေမျှဝေပေးတာ ကို အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်... မအားလို့ ဆုတောင်းနောက်ကျတာကိုတော့.. နားလည်ပါလို့...
28 February 2009 at 04:45
တနှစ်ပြည့် ဆန္ဒ လာချတာ..နောက်ကျ လို့ ခွင့်လွှတ်ပါ ကိုအောင်ရေ။
စိတ်ဆန္ဒတွေ ရှိနေသရွေ့ ဘလော့ နေနိုင်ပါစေ။း)))
ဆရာမြသန်းတင့် ကွယ်လွန်ခြင်း (၁၁)နှစ်ပြည့်
စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုကို လက်မခံရင် ….
ဒိန်းမတ်က မြန်မာပြည်သားတွေ ဘာလုပ်နေလဲ ???
တိုက်ယူရသည့် မျက်ရည်တပေါက် အပိုင်း(၇)
တိုက်ယူရသည့် မျက်ရည်တပေါက် အပိုင်း(၆)
တိုက်ယူရသည့် မျက်ရည်တပေါက် အပိုင်း(၅)